Ku raaxayso Ilaah caqligaaga oo dhan, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan hubaa inaan dhammaanteen u ducaynayno in gacaliyayaasha aan gaalada ahayn - xubnaha qoyska, asxaabta, deriska iyo asxaabta - Ilaah siiyo fursad. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu ku taagan yahay Ilaah. Ma ilaahd baad qiyaaseysaa Ilaaha saddexanka ah ee lagu muujiyay Ciise? Sidee baan kaaga caawin karnaa inaad ku baratid Ilaahay qaab shaqsi qoto dheer? Boqor Daa’uud wuxuu qoray: “dhadhamiya oo arka in Rabbigu naxariis leeyahay!” (Sabuurradii 34,9 Tarjumaadda Cusub ee Geneva). Sideen kaaga caawin karnaa inaad ka jawaabtid casuumadan? Tani maahan wax suuq geyn ah - David wuxuu tilmaamayaa runta qotada dheer ee Eebbe isu muujiyo inuu u ogyahay qof kasta oo raadinaya. Wuxuu nagu martiqaadayaa adkeysiga, xiriirka noloshu beddeleyso ee aan la wadaagno dhammaan cabbirrada jiritaanka aadamiga!
Dhadhamiya in Sayidku naxariis leeyahay
Dhadhamiya? Haa! Inaad la kulanto wanaagga Eebbe ee wanaagsan waa sida cunnad ama cabbitaan macaan oo carrabka ku adkaysanaya. Ka fikir qaniinyada, si tartiib tartiib ah u dhalaali shukulaatada ama khamri guduudan oo isku habboon. Ama ka fikir dhadhanka udgoon jilicsanaanta udgoon ee milixda hilibka lo'da oo lagu daray milix saxan iyo dhir udgoon. Wax la mid ah ayaa dhacaya marka aan ogaano Eebbe muujiyey Ciise. Waxaan rabnaa raynrayntii cajiibka ahayd ee wanaagiisa inuu waarto weligiis!
Ka fikirida hodantinimada dabiiciga ah ee Ilaaha saddexanka ah iyo kakanaanta jidadkiisa waxay u horseedaa gaajo xagga waxyaalaha Ilaah. Ciise wuxuu yiri: «Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan; maxaa yeelay way buuxsami doonaan » (Matayos 5,6 Tarjumaadda New Geneva). Markii aan si gaar ah u baranno Ilaah, waxaan u baahan nahay caddaalad - xiriiro wanaagsan oo qumman - innaga keliya ayaa ah Ilaah. Gaar ahaan markay arrimuhu xun yihiin, damacaani waa mid aad u daran oo uu wax yeeleeyaa sida aan u gaajaysan nahay ama u harraadsan nahay. Waxaan ku aragnay xooggan adeeggiisa Ciise inuu u wado ninkiisa iyo xanuunka uu u qabo kuwa Ilaah diida. Waxaan ku aragnaa rabitaankiisa ku saabsan dib-u-heshiisiinta cilaaqaadka - gaar ahaan xiriirka aan la leenahay Aabbihiis jannada ku jira. Ciise, oo ah Wiilka Ilaah, wuxuu u yimid inuu abuuro wanaaggan oo dhammaystiro cilaaqaad wanaagsan oo lala yeesho Ilaah - si uu uga qaybgalo shaqada Ilaah, iyo in dhammaan cilaaqaadyada si wanaagsan loo sameeyo. Ciise qudhiisa ayaa ah kibista nolosha ee qancisa baahiyadeena qotada dheer iyo rajada aan ka qabno xiriirka wanaagsan iyo kuwa saxda ah. Waxay dhadhamisaa in Rabbigu naxariis leeyahay!
Bal eeg in Rabbigu naxariis yahay
Arag? Haa Aragayaga aragtidayada waxaan ku aragnaa quruxda iyo qaabka fahamka, masaafada, dhaqdhaqaaqa iyo midabka. Xusuusnow sida ay u jahwareersan tahay marka waxa aan dhab ahaan rabno inaan aragno la qariyo. Ka fikir waardiye shimbireed u eg kuwa maqla dhawaqa nooc xayawaan raadis ah oo dhif ah laakiin aan arki karin. Ama jahwareerka isku dayga inaad ku hesho jidkaaga qol mugdi ah oo aan la garanaynin habeenkii. Ka dib tixgeli arrimahan soo socda: Sideen ku ogaan karnaa wanaagga Eebbe oo aan la arki karin oo ku-meel-gaar ah, oo ka sarraysa male-awaalkeena aadanaha? Su’aashani waxay i xasuusineysaa waxa Muuse, laga yaabee in yar oo jahwareer ah, wuxuu Eebbe weydiiyay: "Bal i tus ammaantaada!" (Baxniintii Mox 2: 33,18-19).
Erayga Cibraaniga ah ee sharafta waa "kabod". Tarjumaadda asalka ah ee tan ayaa ah culeys waxaana loo adeegsaday in lagu muujiyo iftiiminta Ilaah oo dhan (oo loo arki karo qof kasta iyo waxa qof kasta jecel yahay) - wanaaggiisa oo dhan, quduusnimadiisa iyo daacadnimadiisa aan dhammaanta lahayn. Markaan aragno ammaanta Ilaah, wax kasta oo qarsoon ayaa la saaraa oo waxaan aragnaa in saddex-geesoodkeenna Eebbe run ahaantii yahay mid naxariis badan oo jidadkiisuna had iyo goor sax yihiin. Ammaanta xaqnimadiisa iyo caddaaladdiisa, Ilaah wuxuu goostay inuu wax walba hagaajiyo. Ilaaheenna nabadda iyo jacaylka nolosha wax siiya waxay ka soo horjeedaan shar kasta oo dammaanad qaadaya in sharku mustaqbal lahayn. Saddex-geesoodnimada Eebbe wuxuu ku iftiimiyaa ammaantiisa wuxuuna muujiyaa dabeecaddiisa iyo jiritaankiisa - buuxitaanka naxariistiisa iyo nimcadiisa caddaaladda ah. Iftiinka ammaanta Ilaah ayaa ku ifaysa gudcurkayaga, oo wuxuu muujiyaa quruxdeeda. Bal eeg in Rabbigu naxariis yahay.
Ogaanshaha saddex-geesiga Ilaah ma ahan sida liqida cuntada degdegga ah ama si aan munaasib ahayn u daawashada fiidiyaha fiidyow saddex daqiiqo ah. Si aad u ogaatid Eebbe ku muujiyey Ciise Masiix, waxaa lagama maarmaan ah in nabarrada indhaha laga saaro indhahayaga iyo in dareenka dhadhanka dib loo soo celiyo. Taas macnaheedu waa in si mucjiso ah loo bogsiiyey si loo arko oo loo dhadhamiyo Ilaah kan uu runtii yahay. Caqligeenna aan dhameystirnayn aad ayuu u tabar daran yahay oo wuu burburay si aan u helno buuxinta iyo ammaanta maamulkayaga ah, Ilaaha Quduuska ah. Bogsiintani waa hadiyad cimri dheer iyo hawl - safar cajiib ah, muujinta daahfurka. Waxay u egtahay cunnooyin hodan ah, oo dhadhamintu ku burburto dhowr koorso, koorso kastaa way ka badan tahay tii hore. Waa sida taxane soo jiidasho leh oo leh tirooyin aan tiro lahayn - oo aad daawan karto, laakiin aan weligaa daalin ama caajisin.
In kasta oo ay tahay safar sahamis, in la ogaado saddex-geesoodka Eebbe ammaanta oo dhan waxay kuxirantahay bartanka dhexe - waxa aan ku aragno oo ku aqoonsanno shakhsiyadda Ciise. Sida Imaam (Ilaah baa inala jooga) isagu waa Sayid iyo Eebbe oo noqday nin la arki karo oo la taaban karo. Ciise wuxuu noqday mid inaga mid ah wuxuuna ku dhex noolaa. Markaan eegno siduu u qoran yahay, waxaan ogaannaa kan “nimco iyo run ka buuxo” oo waxaan aragnaa “ammaanta” wiilka keliya ee ka yimid xagga Aabbaha " (Yooxanaa 1,14 Tarjumaadda New Geneva). In kasta oo «qofna weligiis arkin Ilaah ... wiilka keliya ayaa inoo muujiyey, kan ah Ilaah qudhiisa oo isagu dhinac fadhiya Aabaha» (Yooxanaa 1,18 Tarjumaadda New Geneva). Si aan u aragno Ilaah sida uu isagu run ahaantii yahay, waxaan u baahan nahay muuqaal dambe oo aan ahayn Wiilka!
Ku soco oo sii faafi erayga
Sabuurradii 34 ayaa sawiraya hal Ilaah oo naxariis leh, oo xaq ah, oo jecel, oo shakhsi ah - oo ah kan doonaya carruurtiisu inay la kulmaan jiritaankiisa iyo naxariistiisa oo ka furto xumaanta. Wuxuu ka sheekaynayaa Eebbe oo run ah oo nolosheenna weligeed isu beddelay, oo qalbiyadeenna sida Muuse wax u doondoonayaan isaga iyo jidadkiisaba. Kani waa Ilaaha saddexanka ah, oo aan u soo bandhigno ehelkeenna iyo kuwa aannu jecel nahay. Annaga oo ah kuwa raacaya Ciise, waxaa naloogu yeedhay inaan la wadaagno adeegga wacdinta Rabbigeenna annaga oo wadaagna injiilka Ku gudub (warka wanaagsan) in Sayidku runtii yahay Ilaah wanaagsan. Dhadhamiya, oo arka oo u gudbi in Rabbigu naxariis leeyahay.